Isitayela se-Retro ekugqoke izingubo ngaso sonke isikhathi sithintekile, kungakhathaliseki ukuthi iminyaka yobudala isemngceleni, i-21 noma yama-20. Izitayela eziphezulu ezinemihosha ekhanyayo, amagilavu ​​amade, amaphampu futhi, impela, isembatho sokudoba - cishe uphawu olubaluleke kakhulu lwesitayela - ndawonye udala umfanekiso ogcwele ubuhle obucashile kanye nezigaba ezingapheli.
Isitayela, ukuvumelanisa nobuhle igqoka-trapezoid
Imfashini ngesitayela esinama-geometry anzima kangaka yasungulwa ngekhulu lama-60 ekhulwini lama-20, yaba yiyona ndlela eyinhloko yesikhathi esedlule. Ukusika kwamahhala, imibala ekhanyayo kanye nekhono lokufihla konke okungathi kungabonakali, futhi akugcizeleli ubuhle besibalo sabantu besifazane, sekube yizizathu eziyinhloko zokukhetha okungavumelani kwabesifazane besimfashini. Isikhathi sishintshile, futhi ukuthandwa kwezingubo zokudoba zasehlobo kuye kwahlala ezingeni eliphezulu elifanayo. Ephuzi, eluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, ehlanganiswa namasongo aqhakazile namacici - babhala ngemizi emadolobheni nsuku zonke ngemibala ekhanyayo.
Yiqiniso, i-dress-trapezoid yamantombazane aphelele iyindlela enhle, ihlanganisa amasentimitha angaphezu kwesikhumba noma okhalweni. Kubalulekile ukuthi uma ukhetha imodeli, ubude bayo abukho ngaphansi kwamadolo, ngoba kulokhu lesi silwane sizobukeka sinzima. Ubude obuhle - isundu esisodwa ngaphezu kwamadolo, bese umnikazi wamafomu amahle ngokuqinisekile uyoba mnandi kakhulu futhi ekhangayo.
Umdwebo we-Trapezoidal wahamba kakhulu kunendwangu yansuku zonke. Ngakho-ke, kwakukhona ingubo ende yomshado-trapezium, ethandwa kakhulu nabashadile abafuna ukugcizelela ukufaneleka kwabo futhi bafihle ngokucophelela amaphutha amancane. Ngesikhathi esifanayo, i-flare ngokwayo ingakwazi ukulandela umzila we-hip, futhi ingaqala nabo.
Uma intukuthelo ibonakala ku-wardrobe, umbuzo wokuhlanganiswa okungenzeka kanye nenhlanganisela iba yendalo. Ukukhuluma ngalokho okufanele ugqoke i-dress-trapeze kubalulekile ukukusho ukuthi lapha futhi ukusebenzisana kwazo kudonsa imingcele yamazinga. Phela, unga:
gqoka i-turtleneck ne-pantyhose eqinile ngesikhathi sokubandayo;
ihlanganiswe ngejacket elifinyeziwe noma i-bolero, ukuqoqa ukuhlwa noma umkhosi;
sigqoke kanye namajantshi amahle nesipulatifomu esiphakeme, ufisa ukwenza umqondo ongapheli.
Ekhuluma ngokusebenza kahle ne-chic, kufanelekile ukugqokisa i-trapezoid ende yokugqoka, enganqunywa kuphela yintombazane enethemba kakhulu, ohlala efuna ukuphuma futhi abe ngcono.
Imfashini ye-dress-trapezium iyaqhubeka ithuthukiswa
Namuhla, izingubo zokugqoka ezifashini, ukuhlanganisa ngokuvumelana nezibalo ze-Retro nezitayela zanamuhla, zenziwe ngemininingwane, ngendlela yama-spikes, amaphethini afakwe iphethini, amapokhethi engeziwe nezinkinobho. Impumelelo yabadwebi, naphezu kohlaka olubonakala olucacile lwesitayela, lihlaba umxhwele ngemininingwane eminingana kanye nobuqili minyaka yonke ezivela ezingeni lika-trapezoidal.
Futhi umkhuba okhulayo uphathelene nazo zonke izigaba, futhi ngisho nokugqoka okulula okugqoka umkhwenyana omusha manje kuba umshini womshado kalula, okusho ukuthi, ukuze abe njalo, uswele umlobokazi ngokwakhe, ikhanda lakhe, amagilavu ​​amade kanye nezithende.
Abadwebi befashini ngokuvamile, behlala bethembekile efomu, bashintsha okuqukethwe kwabo kuphela, benze izinto ezihlukahlukene ezithakazelisayo ukuthi, ngakolunye uhlangothi, zigcizelele okhalweni, futhi enye igcine i-geometry. Isibonelo ngengubo ephethe i-skirt-trapezoid, lapho kuphela phansi kufana nomqondo womumo we-trapezoid.
Ngakho, isitayela, ubude, imibala nezakhi zilokhu zishintsha, zenziwa futhi zithuthukisiwe. Izembatho ezimfushane-trapezium zikhethwa amantombazane kunoma yiluphi uhlobo nokumayela okuhamba, imihlangano nabangani, ukuhlanganisa izesekeli nezicathulo ezihlukile, okumele kube khona noma kusezingeni noma esithende.
Kulo modeli, umngcele wokubaluleka uzwakala kahle, okhethwe ngokuyinhloko ngombala. I-Evening dress-trapezium, njengombuso, ibulawa kabili, ngokuvamile iveza imibala ehluke ngokufanayo: omnyama nomhlophe, omnyama nobomvu. Konke okudingekile ukugcwaliswa okuphelele kwesithombe - izicathulo ze-lacquered, isibhamu, i-lipstick ebomvu nekhanda eliphezulu, izinwele zikhishwe.
Ishicilelo elinemikhono emide
Isigqoko sezinsikazi ezinamahlombe
Ukotini jikelele we-silika
Isiketi se-Magny sika-plush
Gqoka ngesitayela selineni
Imfashini igqoka kusuka ejersey
Ukugqoka kusihlwa kusiko lesiGreki
Ukukhula kanye neminye imingcele Iggy Azaleas
Ipulazi yaseShayina evela kusifo sikashukela
I-Barbados - izivakashi ezikhangayo
Ungadla kanjani kancane ukuze ulahlekelwe isisindo?
Ngingadla i-ayisikhilimu ngenkathi ngisindayo?
Isigqoko sabantu baseJapane
Ithebula lesithala etafuleni eliyindilinga
Izitayela ze-Wedding 2013
Herring in Dutch - okumnandi kakhulu!
Yini okufanele ugqoke ama jeans e-pink?
Izingubo zikaKsenia Sobchak
Izimpawu zokuqala zokukhulelwa emva kokuya esikhathini
Indlela yokupheka i-flounder ephelele kuhhavini?
I-Caucasian Shepherd Dog - umlingiswa
Indlela yokugqoka ingubo ngokushesha?
U-Eddie Redmaine noHannu Bagshaw babengavunyelwe ukulandela i-Met Gala 2017
I-artichoke yaseJerusalema - izakhiwo eziwusizo